”Cadowgu uma babac dhigi karo daroonnada Turkiga!” – Ingiriiska oo ka shiray wax ay u arkaan halis kusoo socota | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka ”Cadowgu uma babac dhigi karo daroonnada Turkiga!” – Ingiriiska oo ka shiray...
”Cadowgu uma babac dhigi karo daroonnada Turkiga!” – Ingiriiska oo ka shiray wax ay u arkaan halis kusoo socota
(London) 13 Dis 2020 – Dayuuradda bilaa duuliyaha ah ee Turkigu sameeyo (UAV), ee Bayraktar TB2, ayaa wedkooda noqotay boqollaal gaadiid ah oo gaashaaman, iyo xitaa hannaanka daafaca cirka ee dalalka Syria, Libya, Armenia iyo meelo kale, sida uu sheegay Wasiirka Gaashaandhigga UK.
“Daroonnadani waxay ku abtirsadaan iqtiraaca Turkiga. Markii loo diidey inay ka qayb galaan barnaamijyada muhimka ah ee dibadeed, waxay sameeyeen wixii lagu yaqaanney – iyaga ayaa samaystay oo hal-abuurtay,” ayuu Ben Wallace ka yiri aqoon is waydaarsi uu agaasimey Mac’hadka Difaaca iyo Barashada Amaanka UK ee RUSI.
Wallace ayaa intaa raaciyey in daroonnada Turkish-ku ay wadne xanuun dhab ah ku yihiin cadowga oo aan u babac dhigi karin awooddooda, isagoo si gaar ah farta ugu godey TB2 iyo hubka ay adeegsato.
Bayraktar TB2, ayaa tusaale ahaan haatan ka mid ah daroonnada dabaqadda 1-aad marka la eego bandhiggeeda iyo tayooyinka ay Leedahay. Waxay hawada ku jiri kartaa 24 saacadood, iyadoo gaari karta joog dhan 27,030 oo cagood, isla markaana qaadi karta cuf dhan 150 kg (wax ka badan 330 oo rodol) oo canaab ah. Waxay kale oo howlgeli kartaa habeen iyo maalin.
Bayraktar TB2, kaliya ma qabato howlgallo dagaal, balse waxay sidoo kale aad ugu wanaagsan tahay sirdoonka, sahanka, iyadoo muuqaallada ay ka hesho goobta bartilmaameedka markiiba fasiri karta oo tafaasiil ku dari karta iyadoo aan samaynin wax dib u dhac ah, iyadoo ku qalabaysan bikaacyo casri ah oo ay isla Turkigu hadda sameeyaan. Waxay sidoo kale xambaarsan tahay gantaalo iyo rasaas ku shaqeeya caqliga macmalka ah (AI).
Sida ka muuqata warka Wasiirka, reer Galbeedka iyo dalal kale sida xitaa Ruushka, ayaa si wayn uga walaacsan tiknolojiyadda kobcaysa ee Turkiga oo dalkaa taariikhiga ah markale siinaysa mudnaan istaraatiji ah.
Sirdoonka Israel ayaa beri dhowayd sheegay in halista ugu wayni aanay Iiraan ahayn, balse ay Turkiga tahay, maadaama ay ku dhowaad 70% hubkooda iyagu samaysan karaan.
Previous articleMaqalla si fudud ayaa lagu milkiyey balse Muqdisho mashaqo ayaa lagala kulmay, waa maxay SABABTA ugu mudani?
Next articleQoraa Swedish ah oo isku xirey carruurta badan ee la dhalayo & dhibaatada kooxaha gaangiska (Maxay qortay?)